Real Madrid oo go’aamisay xilliga ay dooneyso inay dhameystirto heshiiska Paul Pogba – Gool FM
(Madrid) 17 Juuunyo 2019. Real Madrid ayaa isku diyaarineysa inay dhameystirto heshiiska xiddiga khadka dhexe reer France iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Saraakiisha Real Madrid ayaa waxay sii go’aamiyeen jadwalka heshiiska ay ku doonayaan Pogba, sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain oo si aad ah ugu dhow kooxda ka dhisan caasimada Madrid.
Wargeyska “Marca” ayaa sheegay in Real Madrid ay dooneyso inay dhameystirto saxiixa Paul Pogba kahor bisha July ee soo aadan, kaasina waa wakhtigii loo qabtay in la dameystiro heshiiska, iyadoo ay kooxda rabto inay ku beegto taariikhdan si uu u bilaabo tababarka.
Real Madrid ayaa ka war qabta in heshiiska uusan aheyn mid sahlan, marka loo fiiriyo qiimaha ku bixi doono iyo go’aanka maamulka kooxda Manchester United, balse hadalka uu sheegay xiddiga reer France ayaa fududeyn kara howlgalka ay Los Blancos ku dooneyso heshiiskiisa, maadaama uu muujiyay sida uu u xiiseenayo inuu tijaabiyo loolan cusub.
Yeelkadeeda, Real Madrid ayaa ka shaqeyn doonta in si dhakhsi ah ay ku soo gaba-gabeyso heshiiskan, kaddib markii ay dhawaan hirgalisay dhamaan heshiisyada xiddigaha kala ah Eden Hazard, Luka Jović, Ferland Mendy iyo Rodrygo.
Macalinka reer France iyo kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa doonaya in ciyaartoydiisa cusub uu isugu keeno xerada tababarka ka hor xilli ciyaareedka soo aadan.
Sida laga soo xigtay wargeysyada maamulka kooxda Manchester United ayaa dooneysa inay hesho 150 milyan oo euros si ay u fasaxdo xiddigeeda Paul Pogba.